Ebee ka bọtịnụ na-esote? | Martech Zone
Usability bụ sayensị, ma ụfọdụ n'ime ya bụ mmuo pụta ụwa. Echetara m na mụ na ndị mmadụ nwere esemokwu banyere ojiji mgbe m rụrụ ọrụ dị ka onye njikwa ngwaahịa. Enwere ụfọdụ ihe enyere - dịka etu anya si esochi ihuenyo (n'aka ekpe gaa n'aka nri), etu ha si agbada ala, yana etu ha si atụ anya ime ihe na ala aka nri.
Ọ bụghị ọtụtụ sayensị metụtara, ụfọdụ n'ime ihe ndị a bụ ihe ebumpụta ụwa, ụfọdụ n'ime ha na-adaberekarị na usoro ndị aga na ntanetị n'ịntanetị.
N'abalị a, anyị nwere enyi nwa m nwanyị, n'ihi ya, m kpebiri ịtụ online si Dominos. Ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ ha dị ezigbo ụtọ - ọ dị ka ọ bụ Java niile. Ọ bụ graphically ụtọ anya, na ọ bụ ngwa ngwa. Ọ dị mma karịa Pizza Hut ma ọ bụ Papa John… na ọ na - arụ ọrụ, n’adịghị ka Donato.
Re: Donato: Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, echere m na m emeela mgbalị iri na abụọ ebe m na-enweghị ike ịnye iwu n'ihi etu o si nwayọ nwayọ ma ọ bụ n'ihi oke nhie .NET
Achọtara m otu okwu na-egbukepụ egbukepụ maka ojiji saịtị ahụ, n'agbanyeghị. Lelee ihuenyo a ma chee na ị na-ejuputa ya:
Mgbe ị dejupụtara ozi gị, anya gị na - eso - ma na - atụ anya - ịga n’ihu na - esote na ịpị aka nri. Ekwesịrị m ịchọ oge tupu m ahụ bọtịnụ ọzọ. Enwere m anya site na bọtịnụ Coupon na ubi ahụ n'aka nri, n'ihi ya enwere m nsogbu ịchọta ya.
Otu mgbanwe dị mfe nwere ike ime ka ibe a dịkwuo mfe ma, ejiri m n'aka, melite ntụgharị nke ndị ahịa:
Naanị ibugharị bọtịnụ ahụ gaa n'aka nri, ebe anya m ga-atụ anya, ga-abụ mmụba dị ukwuu na ntanetị mara mma. M ga-ahụkwa ụcha ọhụrụ, ikekwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, iji nye ihe nlere anya na ngwa niile ahụ ruo mgbe onye ahụ mechara. Ọnọdụ na-agbanwe agbanwe, agba, na ịbụ onye a ma ama ga-enye ahụmịhe na-enweghị ntụpọ nke ga-eduga ndị ọrụ na saịtị ahụ.
Ihe mgbakwunye ọhụrụ na saịtị Dominos bụ Pizza Tracker ha:
The na-akpa ọchị akụkụ bụ na onye ọ bụla na ngalaba fades na na… na ngalaba 5 (nnyefe) ịbụ ndị kasị ibu ngalaba. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Dominos nwere ike wuru faịlụ flash nkeji 30 nke nwere oke zuru oke iji nabata ịbụ +/- 15 nkeji (echere m). Ọ bụ gimmick… ma ọ na-arụ ọrụ.
Enwere mmekọrịta dị mma na ibe ahụ - aha onye ọkwọ ụgbọala na-ebufe nọ ebe ahụ maka nzaghachi ozugbo na ọkwa. Nke ahụ dị mma!
Tags: magnetism ndị ahịaDan zarrellanjikọ akaKipp BodnarMaya Grinbergmbipụta ndị nchụ nta akụkọspamwepu ahauru nke infographicgịnị bụ infographic
Feb 21, 2008 na 9:13 PM
Great, ugbu a, m agụụ na-agụ… ma ọ bụrụ na naanị ụzọ ụgbọ oloko anapụta.
Feb 22, 2008 n’elekere 11:51 nke abali
They don’t deliver, but a few of them have online ordering. It’s not a pretty process, though! I’d have to write a book on their usability issues.
Feb 22, 2008 na 12:40 PM
Ọbụghị naanị na enweghị m ike ịhụ bọtịnụ “Osote”, mgbe m na-achọ ya enweghị m ike ịkwụsị ịdọrọ anya m na nnukwu bọtịnụ “ONLINE COUPONS”. Ọ bụrụ na ị ga-achọgharị na ọnọdụ nke bọtịnụ / njikọ ọzọ, egbula onwe gị miri emi site na itinye nnukwu bọtịnụ uhie na ebe ọzọ na ihuenyo ahụ.
Feb 22, 2008 na 4:20 PM
Igodo ahụ na-esote bụ nnukwu nsogbu. Anọla m na saịtị tupu ebe o siri ike ịnyagharịa (n'ihi ihe ndị na-adịghị mma) na m ga-apụ.
Mar 20, 2008 na 12: 22 PM
Enwere m ụfọdụ ozi dị n'ime nke a na Tracker dị adị - ọ bụ igodo usoro nhazi nke Domino nke ha na-eji agbaso arụmọrụ. N'ezie ziri ezi +/- 40 sekọnd.